New Rome, Nice uye Alicante ndege dziri paIcelandair izvozvi
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » New Rome, Nice uye Alicante ndege dziri paIcelandair izvozvi
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • France Kuputsa Nhau • Iceland Breaking News • Italy Kuputsa Nhau • nhau • vanhu • Spain Kuputsa Nhau • ushanyi • kutakura • Kufamba Wire Nhau
7 mazuva apfuura
Idzi nzira itsva dzeIcelandair dzinopa hukama pakati peNorth America neIceland kune nhatu dzinozivikanwa nzvimbo dzekushanya panguva yekufamba kwegore.
Icelandair nhasi inozivisa kuwedzera kwenzvimbo nhatu nyowani kune network yayo yepasi rose yekufamba zhizha rino: Roma, Alicante naNice.
Idzi nzira nyowani dzinopa kubatana pakati peNorth America neIceland kune nhatu dzinozivikanwa nzvimbo dzekushanya panguva yekufamba kwegore. Vafambi vachakwanisawo kutora mukana wekumira kwemazuva mazhinji muIceland, munzira, pasina imwe mari yendege.
Iyo World Heritage guta re Roma, Italy, ichapihwa kaviri pasvondo pakati peReykjavik (KEF) neRome Fiumicino Airport (FCO) neChitatu neSvondo kutanga Chikunguru 6, 2022, kusvika Gunyana 4, 2022, paine zuva rimwechete rekubatanidza kuenda nekubva kuNorth America.
Ndege yeNice ichapa mukana wekuenda kunharaunda yekumaodzanyemba kweFrance, inoshanda pakati peReykjavik (KEF) neNice Airport (NCE) kubva Chikunguru 6, 2022, kusvika Nyamavhuvhu 27, 2022, neChitatu neMugovera.
Ndege dzinoenda kuAlicante, Spain (ALC) dzichatanga muna Kukadzi 10, 2022, nendege dzinoshanda kusvika kaviri pasvondo munguva yezhizha uye mumwaka wekudonha.
Pamusoro pe, Icelandair yakadzosa ndege kubva kuMontreal neVancouver, ichipa vanhu vekuCanada sarudzo itsva kuIceland neEurope.
Idzi nzvimbo nyowani dzinowedzera kuwedzera nzira yeIcelandair iri kukura, iine chinangwa chekupa vatengi nzira dzakanakisa dzekufamba uye kubatana kuIceland nekumhiri.
Bogi Nils Bogason, Mutungamiri & CEO weIcelandair akati: "Patinopinda muGore Idzva, tiri kuona zviratidzo zvekupora kweindasitiri yekufambisa. Isu tinofara kukwanisa kuwedzera idzi nzvimbo nhatu nyowani kune yedu yakatokura nzira network, zvichienderera mberi nekufambisa kukura mumisika inopinda nekunze. Nekuwedzera kweRome, Nice neAlicante kwechirimo, Icelandair yakazvipira kupa vatengi vedu vekuEurope neNorth Atlantic sarudzo uye kubatana kuri nyore.